Imizila yokuhamba izintaba eMadrid | Izindaba Zokuhamba
Imizila yokuhamba izintaba eMadrid
IMadrid ingenye yeminyango yokungena enkulu yokuthola iSpain. Iyinhlokodolobha, ngakho konke lokho okushoyo, yize ingaphesheya kwemingcele yayo yasemadolobheni futhi ipharadesi eliluhlaza.
Uma ukubukwa kweMadrid kusuka kumabhilidi noma ophahleni lwayo kubonakala kukuhle kuwe, awukwazi ukuphuthelwa yilabo abavela emaphandleni eMadrid. Kungakho sifuna ukukunikeza imizila ethile yokuqwala izintaba edlula eMadrid ukuze wazi imvelo ezungeze idolobha elikhulu.
1 Ama-Patones avela ngaphezulu
1.1 Ungafika kanjani ePatones de Arriba?
2 Umgwaqo iSchmidt eNavacerrada
2.1 Ungafika kanjani eSchmidt Trail?
3 Ibhola Lomhlaba
3.1 Ungafika kanjani kwiBhola Lomhlaba?
Kuthiwa yidolobha elihle kakhulu eMphakathini waseMadrid. Idolobha elihle elibizwa ngokuthi ake laba ngumbuso kanti namuhla yilona kuphela idolobha elisele "labamnyama" esifundazweni sonke. Ngokuqinisekile indawo yayo, eyimfihlo futhi ecishe ifihliwe, ivumele ukwakheka kwayo, indlela yokuphila namasiko ayo ukusinda ekuhambeni kwesikhathi.
Into ebabazekayo ngePatones de Arriba ukubukeka okuhlukile kwezindlu zayo, okuyingxenye yalokho okwaziwa ngokuthi yi- «black architecture». Isitayela esithandwa kakhulu kwezinye izindawo zaseSpain njengeSegovia, Guadalajara neMadrid esaziwa ngokusetshenziswa kwebhodi njengento eyinhloko eyakhayo, ngoba yayichichima kakhulu futhi ibonga kunezinye.
Ngokungafani nePatones de Abajo, umasipala ngokuyisisekelo ohlala ePatones de Arriba akekho umuntu ohlala futhi ikakhulukazi indawo yezivakashi. Ukungena ezimotweni kuvinjelwe ngakho-ke kungakuhle ukuthi sivuke ekuseni sifike edolobheni kusenesikhathi uma singafuni ukuphela isikhala sokupaka endaweni yokupaka encane.
Ukusuka ePatones de Arriba ungathatha umzila wentaba oyindilinga okhuphukela engqungqutheleni yeCancho de la Cabeza, indawo yayo ephakeme ngamamitha ayi-1.263. futhi lapho bangabona khona imibono engakholekiyo yedamu lase-Atazar, iSierra Norte, iLa Pedriza, iPico de San Pedro, iSierra de la Cabrera kanye nedolobha uqobo. Le ngenye yemizila yokuhamba izintaba eMadrid okufanele uyilungiselele kahle ngoba uzohamba amakhilomitha ayi-13 cishe amahora amane. Izindawo ezibukeka kahle, lapho kuningi khona umshanelo, i-rockrose ne-lavender, kufanele zithathwe.
Singakhetha futhi ukwenza imizila emibili yokuqwala izintaba edolobheni enezinhlaka ngaphakathi kwe-Ecomuseum yaseLa Pizarra., ezositshela ngokubaluleka kwamasiko kokwakhiwa kwesifunda nokwakhiwa kokudla okujwayelekile esifundeni nezindawo lapho zenziwa khona (izibuya, izindawo zewayini kanye namahhavini). Kokubili kumakwe ngamapaneli achazayo.
Enye indlela yokwenza indlela yemvelo ye-El Barranco, okuyindlela exhuma iPatones de Arriba nePatones de Abajo.
Ungafika kanjani ePatones de Arriba?
Ukusuka eMadrid ungafika lapho nge-A-1 uphuma ngebanga elingamakhilomitha angama-50 bese uthatha umgwaqo obheke eTorrelaguna kuM-102 uze uthole umasipala.
Umgwaqo iSchmidt eNavacerrada
Isithombe | Izintaba iMadrid
Enye yemizila yokuhamba izintaba ethakazelisa kakhulu eMadrid ukuyenza iCamino Schmidt eNavacerrada. Leli dolobha elisezintabeni zaseMadrid liseSierra de Guadarrama National Park, cishe ngamamitha ayi-1.200 ukuphakama, futhi minyaka yonke livakashelwa yizinkulungwane zabantu abafuna ukunqamula edolobheni elinengcindezi ukuxhumana nemvelo.
ISchmidt Trail ingenye yemizila yokuqwala izintaba edume kakhulu eMadrid ukuyenza eSierra de Guadarrama. Iqanjwe ngegama lomuntu ohamba ngezinyawo u-Eduardo Schmidt owadweba ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX ngenhloso yokujoyina iCercedilla nePuerto de Navacerrada.
Sibhekene nomzila wobunzima obuphansi namakhilomitha ayi-7 enzelwe ukuthi ube ngumzila wendlela eyodwa. Njengoba ivame ukumbozwa yiqhwa ebusika, isikhathi esihle sokwenza iSchmidt Trail sisesentwasahlobo nasekwindla.
Lo mzila wezintaba uqala ePuerto de Navacerrada futhi ugudle umthambeka osenyakatho wezintaba zeSiete Picos (phakathi kweSegovia neMadrid) ulibangise eCercedilla, uphele e-Peñalara Mountain Club Hostel.
Endleleni kunemibono emangalisayo yethafa elifiphele laseCastilian, amahlathi kaphayini nemifudlana yezintaba.
Ungafika kanjani eSchmidt Trail?
Thatha umgwaqo omkhulu u-A6 (N-VI) oya kumasipala waseVillalba lapho kufanele ulandele khona izimpawu zePuerto de Navacerrada. Uma usufikile lapho, ukuze ufike endleleni yeSchmidt, kufanele weqe umgwaqo bese uqhubeka nendlela eholela e-El Escaparate ski slope, lapho indlela iqala khona.
Isithombe | Ukujabulela Imindeni
Enkabeni yezintaba zaseGuadarrama futhi ngaphakathi kweNavacerrada iBola del Mundo ikhona, igama i-Alto de Guarramillas elaziwa kakhulu ngalo, endaweni ephakeme ngamamitha angaphezu kuka-2.000 XNUMX.
Le ngenye yemizila yokuqwala izintaba edlula eMadrid enenkinga ephansi. Sekukonke kunamakhilomitha ayi-11 enziwa ngamahora amane. Umzila weBhola Lomhlaba ungaqalwa usuka ezindaweni eziningana kepha enye yezindawo ezivame kakhulu yiPuerto de Navacerrada. Ukusuka lapha, umzila ungamakhilomitha ayi-8,4 ubude uma ubheka amakhilomitha okwehla.
Njengokulangazelela, isici esikhomba le ntaba yizimpondo zomsakazo nezethelevishini ezitholakala kuyo. Imvamisa zisebenza njengesijwayelo seminye imizila yokuhamba izintaba eMadrid njengoba zimbozwe umvikeli we-rojiblanco ofana nerokhethi futhi azenze zibonakale kalula.
Ungafika kanjani kwiBhola Lomhlaba?
Ngemoto, thatha i-A-6 uye eVillalba, lapho uthatha khona umgwaqo uye ku-M-607 ulibangise eNavacerrada. Ngesitimela, thatha ulayini C9 uye esiteshini sasePuerto de Navacerrada. Ukungena kuzoba ngezinyawo kusuka esiteshini saseCercanías-Renfe kuya ePuerto de Navacerrada.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Imizila yokuhamba izintaba eMadrid